Vatsy tsinjo sy fitarainana, Fanafihan-dahalo mitam-basy, Fitorian’ny Antenimieran-doholona, ‘covid-19’... - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Vaovao maro lafy no nisongadina hatramin’ny alin’ny alahady 6 septambra nikabarian’ny filoham-pirenena sy andro vitsy talohan’izany tamin’ny fampitam-baovao samihafa.
Hetsika noho ny fanakatonana ny orinasa AAA.
Mpamokatra ronono amin’ny faritr’i Vakinankaratra no naneho ny hatezerany tao Antsirabe noho ny fanakatonan’ny fanjakana ny orinasa AAA izay mandray ny rononon’izy ireo. Orinasa AAA izay an’ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana. Tamin’ny sabotsy 5 septambra no nitrangan’izany. Nakaton’ny fitondram-panjakana tsikelikely moa ny orinasa AAA eto amin’ny Nosy, nanomboka tao Antananarivo.
Vahoaka maro no nidina an-dalambe tamin’ny 7 septambra teo, nitaky ny anjara vatsy tsinjo ho azy ireo teny amin’ny By-pass kaominin’Ambohijanaka sy kaominina eny Atsimondrano noho ny fahitan-dry zareo fa misy fiangarana ny fizarana ny vatsy tsinjo sy tosika fameno. Nahitana izany koa tao Antananarivo-renivohitra teny Isotry Andranomanalina. Na dia nisy aza ny fitarainana natao dia tsy nahazo hatrany tamin’ny tosika fameno 100 000 Ariary na vatsy tsinjo ny olona. Nambaran’izy ireo fa ireo manan-karena manana tomobilina indray aza no mahazo, ka nanaovan’izy ireo antso amin’ny fitondram-panjakana mba hijery ny momba azy ireo.
Fandriam-pahalemana sy dahalo.
Notaterin’ny haino aman-jery tsy miankina ny fanafihan’ny andian-dahalo mitam-basy miisa 50 ny tanàna atao hoe Beombalahy any amin’ny distrikan’i Mandoto, kaominina Anjomà Ramartina. Nodoran’ireto dahalo ny tanàna, ary olona efatra no maty tamin’ny tifitra, ankoatra ny naratra. Ny alahady 6 septambra no nitrangan’izany.
Fitorian’ny Antenimieran-doholona. Nametraka fitoriana eny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana na ny HCC ny solontena avy ao amin’ny Antenimeran-doholona tamin’ny 7 septambra teo, momba ny fandaniana ilay volavolan-dalàna laharana 001/2020 tamin’ny 26 febroary 2020 izay tsy nanara-dalàna satria tsy misy ny sonian’ny ny filohan’ny antenimiera roa tonta ny tatitra nentina tany amin’ny praiminisitra.
Manantitrantitra hatrany ny mpitondra teny ofisialy, ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, fa mbola tsy tapitra ny ady amin’ny fihanaky ny tsimokaretina ‘covid-19’, tamin’ny 8 septambra 2020, araka ny tatitra fanaony amin’ny radio sy televiziona rehetra. Tsikaritra tamin’io andro io fa lasa 1010 ny fitambaran’ireo am-pitsaboana raha efa latsaky ny 1000 izany tamin’ny herinandro. Tafakatra 206 ny fitambaran’ireo namoy aina satria niampy 4 izany tamin’io andro io. Mandritra io fotoana natokana ho an’ny ‘covid-19 io’, dia misy ny dokotera manao fitaizana ara-pahasalamana toa an’i Dr Andriamiarinarivo Miarintsoa, ‘psychothérapeute’. Anisan’ny lohahevitra nentiny ny amin’ny torimaso tamin’ny 8 septambra 2020.